Date My Pet » pamusoro 5 US Cities nokuti Single Men
Last updated: Jan. 18 2021 | 2 Maminitsi verenga
Kune mamwe maguta US apo varume vasina kuroora kudekara kupfuura vamwe. Kukurukurirana Iri pamusoro mazita zvishanu pamusoro pamazita maguta akadai. saka, kana uri mumwe uye akatarira atamire, ichi nyora-up zvirokwazvo kuva dzinobatsira iverengwe kwamuri; uye kana uchitova mune rimwe ramaguta awa, funga pachako rombo.
1. New York City: guta rino haisi nyika zvikuru mumaguta nharaunda, asi ndiwo mumwe kupfuura iconic nzvimbo munyika. Guta misoro aya yakanakisisa US maguta varume vasina kuroora zvikurukuru nokuda reshiyo varume vasina kuroora uye vakadzi. For ose 100 varume vasina kuroora, guta rine 125 vakadzi vasina kuroora; saka, varume vasina muNew York City nguva dzose vane mijenya zvaungasarudza iripo kusarudza kubva panyaya sokunhonga vadyidzani.
Kazhinji se “guta asina anorara”, New York City dzimba Jafeti zvaungasarudza kusarudza kubva kunyange kana totaura nezvokudanana munzvimbo. Unogona Lounge muna Central Park kana anogona vasarudze kuti tipedze fadza manheru pane POSH kirabhu (guta rine vakawanda vavo).
2. Bismarck: Single varume kutarisa kugara pasi kunogona funga Kutamira kuzvivako Bismarck, guta guru rehurumende North Dakota. Kunyange zvazvo redundancy pari nyaya hombe America yayo kunopindirana kwemabasa zvazvingava inovandira kumativi 5.6 %, ari urovha mwero muguta iri chete 2.8%.
Pamusoro pe, kuturika panze uye kupedza nguva nevakadzi, guta rine nhamba inopisa makwapa, izvo zvinosanganisira Pubs, usiku makirabhu uye mumaresitorendi. Bismarck anobvumira kufambidzana mumvura; unogona kutora wako kudanana naye nekuti chikepe kukwira panguva McDowell Dam Nature Park.
Varume vanoda Biking, pane rimwe divi, anogona kutora chikamu mune Biking trails kumahombekombe ari Missouri River.
3. Washington D.C.: Kana uri murume chinzvimbo kuroora, US guru ndiyo nzvimbo iwe nhengo. Guta dzimba dzinoverengeka zvinokwezva historiallinen uye tsika uye ndiyo nzvimbo vakadzi vasina dzinopfuura varume vasina kuroora.
Kana vari Washington D.C., iwe uchava kuwana plethora zvaungasarudza kunyange kutsvaka zuva gwapa. Unogona kutora mumwe wako kuti chikepe kukwira pamusoro Tidal Basin, kushanyira National Zoo, kana kupedza unodziya manheru enhoroondo Jazz bhawa The Bohemian Caverns. Iyi inongova sarudzo shoma une; uchawana zvakawanda kupfuura kamwe muri muguta.
4. Philadelphia: Enhoroondo Kugamuchirwa guta rino zvinoita izvozvo entrant chechina pazvinhu izvi. The akanaka varume vasina kuroora kuti kuroora vakadzi reshiyo chimwe chinhu basa nokuita Philadelphia mumwe kumusoro 5 maguta varume kuroora.
Dating muPhiladelphia chinhu chiitiko chikuru kwete chete nokuda nzvimbo yakaita Fairmount Park, Philadelphia Museum of Art, Ortlieb kwakaita Jazzhaus uye zvichingodaro, okunze reguta uyewo basa kuiita dater kuti paradhiso. Mazuva ose jeka mazuva muPhiladelphia.
5. Miami: The Spicy Nightlife pamusoro unoita kuti guta guru dzokugara varume kuroora. The yakaderera mutengo wevapenyu kuvapo vakadzi vakawanda vasina kupfuura vanhu vamwe zvikuru zviviri ndakakuitai Miami kwokupedzisira entrant muurongwa.
Mumwe nomumwe Maguta aya shanu achabvumira vanhu vasina kuva kuitika upenyu. saka, zviri zvachose kwamuri izvo munhu unofarira atamire kune.
pamusoro 10 Photo Blunders